HTC One Mini 2 tonga tany Espana | Androidsis
HTC One Mini 2 tonga tany Espana
Alfonso ny voankazo | | HTC
Mihabetsaka ny mpanjifa mitady fitaovana matanjaka nefa manana écran kely noho ny 5 santimetatra. Hatramin'izao, ny safidy lehibe indrindra dia ny iPhone na Sony Xperia Z Compact.
El Z3 Compact dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho tonga any Espana amin'ny farany htc one mini 2, terminal izay dia natolotra tamin'ny faran'ny Mey Saingy naharitra 6 volana mahery vao tonga tany amin'ny fomba ofisialy teto amintsika.
Ny HTC One Mini 2 dia mitentina 399 euro
Tadidio fa ny HTC One Mini 2 dia terminal izay mampiditra azy ao amin'ny ambony afovoany, noho ny efijery 4.5-inch azy, miaraka amina processeur 400GHz quad-core Qualcomm Snapdragon 1.2, 1GB RAM, fakan-tsary 13 megapixel ary fakan-tsary eo anoloana 5-megapixel.
Ny bateria 2.100 XNUMX mAh dia mampanantena fahaleovan-tena mihoatra ny ampy, mahita bebe kokoa ny endri-javatra ny HTC One Mini 2 vaovao. Asongadino ny tahiry anatiny 16 GB azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny slot karatra micro SD. Ny HTC One Mini 2 vaovao dia mandeha amin'ny Android 4.4. KitKat eo ambanin'ny sosona Sense 6 avy amin'ny mpanamboatra Koreana.
Tadidio fa mahavariana ny endriny, miaraka a vatana aluminium cToy ny HTC One M8, fa raha mihevitra isika fa hahatratra ny fivarotana Phone House amin'ny vidiny 399 euro ny terminal, dia toa sangisangy amin'ny tsiro ratsy izany.
Ho an'ny vao manomboka, ary manala ny fakantsary sy ny slot amin'ny karatra SD, ny HTC One Mini 2 Izy io dia manana endrika mitovy amin'ny an'ny Moto G vaovao, terminal izay efa ho antsasaky ny vidiny.
Ary etsy ankilany, raha miditra ao amin'ny tranokalan'ny Telefaona finday isika dia afaka mahita fa ny Sony Xperia Z3 Compact dia mitentina 100 euro fotsiny. Raha ny marina, noho io fahasamihafana io, tsy hisalasala mandritra ny iray minitra aho ary hividy ny terminal Sony izay mamafa ny HTC One Mini 2 amin'ny lafiny rehetra.
Ireo tovolahy ao amin'ny HTC dia manana asa betsaka hatao raha te-hamerina ny tsena very izy ireo ary miaraka amin'ny fihetsiketsehana mahatsiravina toy izao, dia kely ny azon'izy ireo atao. Izy ireo dia mandefa azy eny an-tsena amin'ny vidiny 299 euro ary miova ny toe-javatra, mandoa aho fa manana terminal misy famaranana tsara, saingy amin'izany dia miorina amin'ny, raha ny hevitro fisolokiana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » HTC » HTC One Mini 2 tonga tany Espana
Ahoana ny fomba hamahana ny olan'ny bokotra tapaka amin'ny Android anao